Nagu saabsan - Arenti & Laxihub
Arenti waa xirfadle soo -saare xalka amniga amniga IoT Smart Home iyo soo -saare, ku dhashay Hoofddorp, Netherlands sannadka 2020; oo ay aasaaseen injineero ka socda shirkadaha amniga adduunka ugu sarreeya. Iyada oo ay weheliso shirkadda heysata, waxaan ku urursannay afar sano oo waayo -aragnimo ah R&D iyo sameynta kamaradaha amniga guriga ee caqliga badan ilaa 2017. Sanadka 2020, shixnadaha sannadlaha ah waxay gaareen 3.8 milyan oo unug.
Sida soo-saaraha IoT, Arenti wuxuu diiradda saarayaa horumarinta tikniyoolajiyadda ugu sarreysa. Kaamirooyinka Arenti waxay muujinayaan shaqooyin ku shaqeeya Sirdoonka Artificial-ka, sida Ogaanshaha Dhaqdhaqaaqa AI, Ogaanshaha Dhawaaqa, Ilaalinta Asturnaanta Geo-Fencing, Aagga Ogaanshaha La-beddeli karo, Super P2P, Gen. 2.0 Web-RTC, iwm. iyadoon wax kharash dheeraad ah lahayn.
Laga soo bilaabo bilowgii ugu horreeyay markii uu dhashay, Arenti waxaa ka go'an inay siiso IoT alaabo amniga guriga oo caqli badan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha leh baahiyo kala duwan oo adduunka oo dhan ah. Gudaha Arenti dadku waxay si sahal ah uga heli karaan kaamirooyin go'an gudaha, kamaradaha digsiga, kaamirooyinka rasaasta dibedda, kaamirooyinka daadadka, kaamirooyinka bateriga ku shaqeeya iyo gambaleelka fiidiyaha ee hoos yaal laba summadood: Arenti suuqa ugu sarreeya halka Laxihub ay tahay ikhtiyaar aad u jaban.
Arenti wuxuu hiigsanayaa inuu noqdo mid ka mid ah soosaarayaasha ugu wanaagsan iyo soosaarayaasha IoT Smart Home Security adduunka oo dhan, isagoo hal abuur leh oo hal -abuur leh mar walba oo u siiya isticmaaleyaasha adduunka oo dhan astaamaha ugu qabow alaab kasta oo Arenti ah, oo ka caawiya dadka leh garaacis iyo xalka fudud nabadgelyada qofka iyo guriga. Arenti waligeed ka shaqayn mayso isku -duwidda, laakiin mar walba fiiro gaar ah siiso R&D, iyo inay noqoto hoggaamiye caalami ah oo ka shaqeeya warshadaha.
KU SAABSAN LAXIHUB
Laxihub waa astaanta hoose ee Arenti Technology. Laxihub oo ah soo-saare dabagalka fiidiyaha fiidiyowga guriga ee xalka leh oo buuxa, Laxihub wuxuu diiradda saarayaa horumarinta iyo soo-saaridda khadadka alaabta guriga ee caqliga leh, hufan, iyo saaxiibtinimo leh. Waxsoosaarka Laxihub waxaa hogaaminaya tikniyoolajiyadda Arenti, oo ay weheliso naqshadihii asalka ahaa ee kooxda naqshadeynta Arenti, Laxihub waxay siisaa isticmaale kasta wax qurux badan, si sahlan loo isticmaali karo, iyo alaab qiimo leh. Isla mar ahaantaana, Laxihub waxay fiiro gaar ah siisaa asturnaanta adeegsadaha iyo khibradda adeegsadaha waxayna adeegsataa tikniyoolajiyadaha ugu goynta badan iyo bixiyeyaasha adeegga ugu fiican ee naqshadeynta qalabka wax soo saarka iyo adeegyada softiweerka si loo hubiyo asturnaanta isticmaaleha iyo xogta isticmaale ee sugan. Laxihub, adeegsade kasta wuxuu la kulmi doonaa alaabada IoT ee ugu tayada wanaagsan.
Shirkadda haysata ee Arenti waa la abuuray waxayna gashay warshadaha IoT Smart Home Security sanadkii 201701
Arenti waxaa la aasaasay qeybtii hore ee 2020, xarumaha hawlgalka ee NL iyo PRC labadaba waa la aasaasay02
Kaamiradii amniga gudaha ee ugu horreysay Arenti IN1/Laxihub M4 ee Arenti ayaa la bilaabay Juun 202003
Arenti 2K Aluminium-Frame Optics Smart Home Security Cameras Series waxaa la bilaabay Diseembar 202004
Taxanaha Arenti Optics wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadaynta Dhibcaha ee 2021 bishii Maarso 202105
Taxanaha Arenti Optics wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta iF 2021 bishii Abriil 202106
Kii ugu horreeyay ee 2.4 GHz & 5 GHz oo ah kamarad Wi-Fi ah-Laxihub MiniCam ee Arenti ayaa la bilaabay Abriil 202107
SI AAD WAX U ARAGTID, U HADLID OO UU TAABO
Marka la joogo Arenti, nabadgelyada shaqsiyeed iyo tan gurigu way fududaanaysaa.